နည်းပညာမြင့် Tech Gadgetry လေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး ~ The ICT.com.mm Blog
နည်းပညာမြင့် Tech Gadgetry လေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး
High Tech ပစ္စည်းလေးတွေနှစ်ခြိုက်သူတွေအနေနဲ့ 11.11 Super Sale အစီအစဉ်မှာ 21% အထိ Discount ရနိုင်မှာပါ။ လတ်တလောလူကြိုက်များနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း Promotion ပေးထားပါတယ်နော်။
1. Hoco BS41 Warm Sound K Song Wireless Speaker (Black) – 15%
2. Hoco Z35 Companheiro Front and Rear Seat PD3.0 Car Charger (Black) – 15%
3. Hoco Tabletop Holder for Live broadcast LV01 Rouge – 15%
4. Hoco DGA04 VR Glasses (Black) – 21%
5. Wacom One Pen Display DTC133W0C – 15%
စတဲ့လူကြိုက်များပစ္စည်းကောင်းလေးတွေအပြင် အခြားသော Gadgets လေးတွေထဲကနေလည်း ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လင့်ခ်လေးလည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Learn More » https://bit.ly/2YzIYBn
Newer ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ အိမ်သုံး နှင့် မီးဖိုချောင်အသုံးအဆောင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမယ့်သူတွေအတွက် 20% က နေ 50% အထိ Discount ရနိုင်ပါပီ
Older Special Discount ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင် ဒီ Promotion မှာဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေကို Delivery ခ Free နဲ့ အိမ်တိုင်ယာရောက်ပို့ဆောင်ပေးဦးမှာနော်